” ၃၇၅ ” ဘတ်စ်ကား ( ဘေဂျင်းမြို့က ဖြစ်ရပ်မှန် ) – Na Pann San
” ၃၇၅ ” ဘတ်စ်ကား ( ဘေဂျင်းမြို့က ဖြစ်ရပ်မှန် )
၁၉၉၅- ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာ (၁၄) ရက်ည..။
ညဉ့်အရမ်းနက်ပြီး ဆောင်းရာသီက အေးခဲလှတဲ့အပြင် လေက အရမ်းပြင်းထန်နေတယ်။ ဘတ်စ်ကား တစ်စင်း ဟာ ယွမ်မင်ယွမ် (Yuanmingyuan ) ဘတ်စ်ကားဂိတ်က တဖြည်းဖြည်း​ထွက်ခွာ လာတယ် ။ အဲဒီကားက Xiangshan ဘတ်စ်ကားဂိတ်အထိ သွားမယ့် ၃၇၅ ဘတ်စ်ကားဖြစ် တယ် ။
ဘတ်စ်ကားပေါ် မှာ ယာဉ်မောင်း နဲ့ လက်မှတ်ရောင်းသူ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး။
ဒါ ဒီည ရဲ့နောက်ဆုံးဘတ်စ်ကားပဲ ။ ပထမဆုံး မှတ်တိုင် (South Gate Bus Station of Yuanmingyuan) မှာရပ်လိုက်တော့ ခရီးသည် ၄ ​​ယောက်တက်လာတယ်။
လူငယ်စုံတွဲ တစ်တွဲ၊ အဘွားအို တစ်ဦး ၊ လူငယ် တစ်ဦး ၊ သူတို့ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်ပြီးတဲ့ အခါ၊ လူငယ်စုံတွဲဟာ ကားမောင်းသူ အနောက်ဘက် နှစ်တန်းမြောက်က နှစ်ယောက်ထိုင်ခုံ ( double-row seat ) မှာတွဲ ထိုင်တယ်။ လူငယ်နဲ့ အဘွားအိုက ဘတ်စ်ကားရဲ့ ရှေ့တံခါးအနီးက ညာဘက်ခြမ်း (the single-row seat ) မှာရှေ့နောက်ဆင့်ပြီးထိုင်ကြ တယ်။
” ၃၇၅ ” ဘတ်စ်ကား
ညဟာ အေးဆေးတည်ငြိမ်နေပြီး ဘတ်စ်ကားအင်ဂျင် ရဲ့ဟောက်သံလောက် ပဲ ကြားနေ ရတယ်။ ဘေးကဖြတ်သန်းသွားတဲ့ယာဉ်တွေနဲ့ လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုတော့ မမြင်ရ လောက်အောင်ပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘေဂျင်းမြို့ရဲ့ နိုဝင်ဘာလ ညဉ့်နက်ပိုင်းတွေဟာ အရမ်းအေးပြီး မြူတွေကျကာ မှောင်မိုက်လေ့ရှိတယ်။
ဘတ်စ်ကား ဟာ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဆင်ခြေဖုံးနေရာတွေ ကို ဖြတ်သွားတဲ့ ကားမို့..။
( အဲ့ဒီတုန်း က ၃၇၅ ဘတ်စ်ကားသွားရာ လမ်းကြောင်း ဟာ အလွန်ဝေးလံသောဒေသများ ကို ဖြတ်သန်းမောင်းနှင် ရတယ်။ )
ဘတ်စ်ကားက နောက်မှတ်တိုင်ဖြစ် တဲ့ (Beigongmen) ကားမှတ်တိုင်ကိုဖြတ် သွားတယ် ။ ကားမှတ်တိုင်မှာ လူတစ်ယောက်မှမရှိ။ ဒါကြောင့် မရပ်တော့ဘဲ ဆက်မောင်း လိုက်တယ်။ ယာဉ်မောင်းဟာ ရုတ်တရက်ကျယ်လောင်စွာ အော်ဟစ် ညည်းတွားလိုက်တယ်။
“ အိုး ရှေ့မှာ လူတွေပါလား ။ ဘာတွေလဲ..။ မှောင်လိုက်တာ။ ဒီတစ်ခါ အမှောင်ကတော့ ကျွန်တော် သရဲတစ်ကောင် ကို တောင်မြင်နိုင်မှာမ ဟုတ်ဘူး ။ ဒီနေ့တော့ ငရဲပဲ ။ ဒီလူတွေ ဘာလုပ်နေလဲ မသိ ”
ဘတ်စ်ကားက သူတို့ နဲ့ နီးလာတော့ .. မီတာ ၁၀၀ လောက် အကွာအဝေးက အရိပ် ၂ ခုဟာ ဘတ်စ်ကား ကို အသည်းအသန်တားနေတာ ကို ကားပေါ်ကလူတွေ အကုန်မြင် လိုက်ရတယ်။ လက်မှတ်ရောင်းသူ ကောင်မလေးက..
“ရပ်ပေးလိုက်ပါ။ အပြင်မှာရာသီဥတု အရမ်းအေးနေတာ.. ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ ကားက နောက်ဆုံးဘတ်စ်ကား မဟုတ်လား…?”
( အဲဒီအချိန် တုန်း က Yuanmingyuan-Xiangshan Road section မှာ အဲဒီ ၃၇၅ ဘတ်စ်ကားပဲ ရှိတယ် ။ တက္ကစီတွေလည်း အဲဒီလိုဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ လမ်းကိုမပြေးနိုင်ဘူး..။)
မှတ်တိုင်မဟုတ်ဘဲ ရပ်တာ တရားမဝင်ပေမဲ့ ကြင်နာတတ် တဲ့ ဘတ်စ်ကားမောင်းသမားက ကားရပ်ပေး လိုက်တယ်။
ဘတ်စ်ကားပေါ် တက်လာတာ သူတို့ထင်တဲ့ အတိုင်း လူနှစ်ယောက် မဟုတ်ပါ။ လူသုံးယောက်ဖြစ်နေတယ် ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူနှစ်ဦးရဲ့ကြားမှာ နောက်လူတစ်ယောက် ရှိနေသေးလို့ပဲ ။
အလယ်ကလူဟာ သူရဲ့ ဦးခေါင်းကို ငိုက်စိုက် ချထားတယ်။
ကျန်တဲ့ ၂ ယောက်ကတော့ ဟိုးရှေးရှေးတုန်း က အင်္ကျီအရှည် (Qing Dynasty 1644-1911 ခေတ်က) ကို ခြေထောက်ဖုံးတဲ့ အထိ ဝတ်ထားတယ်။ မျက်နှာတွေမှာ မိတ်ကပ်ဖြူဖြူတွေ လိမ်းထား သလို..။ လူတွေက အခြေအနေ ကို ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။
ကားမောင်းသူ ကလည်း ကွက်ကြည့်၊ ကွက်ကြည့်နဲ့ ဘတ်စ်ကား ကို ရှေ့ဆက်မောင်းခဲ့..။ အမျိုးသမီး လက်မှတ်ရောင်းသူက အားလုံးစိတ်သက်သာရာရအောင် ဒီလိုစကား စတယ်။
“ ဒီနား အနီးတစ်ဝိုက် မှာ အဲဒီလိုဝတ်စုံတွေ ဝတ်ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကြသလား ပဲနော်..။အဝတ်အစားလဲဖို့ အချိန်မရကြဘူးလား ရှင့် ? အလယ်က တစ်ယောက် အရမ်းသောက်လာတယ် ထင်ပါ့။ “
သူမပြောတာ ကို လူတိုင်းနားထောင်နေတယ် ။ အားလုံးငြိမ်သက်ပြီး အသံတစ်သံ မှ တုန့်ပြန်ထွက်မလာ။ လက်မှတ်ရောင်း မိန်းမပျိုလေးက ခေါင်းကိုလှည့်ကြည့်ပြီး နောက်ဆုံးတန်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ လူသုံးယောက် ကို လေးလေးနက်နက်ကြည့် လိုက်တယ်။
ဘာ လို့ စကားမပြန်တာလဲ ဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ပေါ့..။
ကားကရှေ့ဆက်လက်မောင်း .. ဘတ်စ်ကားက ပြတင်းပေါက်က လေတိုက်သံတွေ တဝူးဝူး နဲ့…။
ဘတ်စ်ကားတစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်နေဆဲ…။ ရှေ့မှတ်တိုင်ကျတော့ လူငယ်စုံတွဲဟာ ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဆင်းသွားတယ်..။ ယာဉ်မောင်းနဲ့ စပယ်ယာအမျိုးသမီးလေးဟာ တိတ်ဆိတ်မှုကို ဖြိုခွင်းတဲ့အနေနဲ့ စကားစမြည်ပြောပြီး ရယ်မောကြ တယ်။
အဘွားအိုက ရုတ်တရက် မတ်တပ်ထရပ် လိုက်တယ်။
အရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့ လူငယ်ကို လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးပြီး
“ သူခိုးဗျို့… သူခိုး!!!”
လို့ အဘွားကြီး က ရူးသွပ်စွာအော် ဟစ်လိုက်တယ်။
လူငယ်က ကြောင်တောင်တောင် နဲ့ အဘွားကြီးကိုကြည့်တယ် ။ အဘွားကြီးက အသက်ကြီးနေပြီ..စိတ်မမှန်ဘူးထင် ပါရဲ့ လို့ တွေးမိတယ်။ အဘွားကြီးက မရပ်.. ဆက်တိုက်အော်နေတယ်။
ကားပေါ်မှာ အပြေးတစ်ပိုင်း ထရပ်ပြီး စွပ်စွဲနေ တဲ့ အမျိုးသမီးအိုကြီး ကို ကြည့်နေရင်း အဲဒီလူငယ်ဟာ ဒေါသထွက် လာတယ်။ အဘွားအိုက ပိုဆိုးတယ်။ လူငယ်ကိုအော်ငေါက်ရုံမက လက်ဝဲလက်နဲ့ လူငယ်ရဲ့ ရှပ်အင်္ကျီလည်ပင်းကော်လာကို ဆုပ်ကိုင် လိုက်တယ်။ လူငယ်ဟာ ပြောမပြနိုင်လောက်အောင်ဒေါသထွက်သွားတာပေါ့ ။
“ရှေ့မှတ်တိုင်မှာရပ်၊ အဲဒီနားမှာ ရဲစခန်းရှိတယ်”
“ ဒါဆို ရဲစခန်းသွားမယ်ဗျာ ။ ကျွန်တော်တို့ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရမှာပေါ့”
ဘတ်စ်ကားက မှတ်တိုင် မှာ ရပ်တန့်သွားတယ်။
အဘွားအို က လူငယ်လေး ရဲ့ ရှပ်အင်္ကျီကို မလွှတ်ဘဲ ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်တယ်။
သူတို့ကိုထားပြီး မောင်းထွက်သွားတဲ့ ဘတ်စ်ကား ကိုကြည့်ပြီး အဘွားအိုက အသက်ပြင်းပြင်း ရှူလိုက်တယ် ။
“ ရဲစခန်းဘယ်မှာလဲ ” လို့ စိတ်ဆိုးဆိုး နဲ့ အော်လိုက်တယ်။
” ကောင်လေး …မ င်းရဲ့ အသက် ကို ငါ ကယ်လိုက်တာ”
လူငယ်ဟာ နားမလည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ် သွားတယ်။
“ ကားပေါ် နောက်တက်လာ တဲ့ လူ ၃ ယောက် ကလူတွေ မဟုတ်ဘူး။ တစ္ဆေတွေဟဲ့ ”
“အဘွားကြီး .. တကယ့် ကို စိတ်မမှန် ပါလား” လို့ စိတ်ဆိုးဆိုး နဲ့လှည့်ထွက်သွားတော့တယ်။
“ ဟေ့၊ ခဏနေဦး.. မင်းမယုံဘူး မဟုတ်လား..သူတို့ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်လာကတည်းက ငါသံသယ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်သူ တို့ကို ငါ မသိမသာကြည့်နေတာ။ ပြတင်းပေါက်ကနေ လေတိုက်တော့ သူတို့ အင်္ကျီအရှည်ကြီး လန်သွား တယ်။ သူတို့မှာခြေထောက်တွေ မရှိဘူးဆိုတာ ငါသိလိုက် ရတယ်။”
လူငယ်ဟာ မျက်လုံးပြူးပြီး ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ် ။ စကားလုံးတစ်လုံး မှ မပြောနိုင်..။
“ မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ ။ ရဲစခန်းသွားပြီး အကြောင်းကြားရအောင် ”
သူတို့ ရဲတိုင်ပေမဲ့ ဘယ်သူက ယုံမှာလဲ…။ လူငယ်လည်း သိပ်မယုံဘူး ။
ဘတ်စ်ကား ၃၇၅ ယာဉ်မောင်း နဲ့ အမျိုးသမီးလက်မှတ်ရောင်း ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သတင်းထဲ ပါလာတာပဲ။ ဘေဂျင်းမြို့ ညနေသတင်းက လူငယ်နဲ့ အဘွားအိုကို တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး ရုပ်မြင်သံကြားမှာ လွှင့်လိုက်တယ်။ အဲဒီ ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်း တဲ့ သတင်းဟာ လျင်လျင်မြန်မြန်ပဲ ပျံ့နှံ့သွားတယ် ။
အဲဒီတုန်းက ဘေဂျင်းမြို ရဲ့ အမှတ် ၃၇၅ ဘတ်စ်ကားပျောက်ဆုံးတဲ့ အကြောင်း ဟာ ဘေဂျင်းမြို့ကလူတွေ မသိတဲ့သူ မရှိသလောက်ပဲ ။
တတိယမြောက်နေ့ မှာ Xiangshan က ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကျော်ေ ဝးတဲ့ ( ကားမောင်းရင် ၂ နာရီ) Miyun ရေလှောင်ကန်နားမှာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဘတ်စ်ကားကို ရဲတွေက ရှာတွေ့ ခဲ့..။
ပထမအချက်က ဘတ်စ်ကားဟာ တစ်နေ့လုံးခရီးသွားပြီးတာကြောင့် နောက်ထပ် ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကျော် ဆက်သွား ဖို့ ဓာတ်ဆီ အလုံအလောက်မရှိပါ။
ဘတ်စ်ကားထဲက လောင်စာဆီဟာ ဓာတ်ဆီ မဟုတ်ဘဲ အမည်းရောင် ပျစ်ပျစ်အရည် ( တိရစ္ဆာန်သွေး နဲ့ လူသွေး ရောထားတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ အရည်) တွေနဲ့ပြည့်နေ။
ဘတ်စ်ကား မောင်သမား လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ကောင်မလေး ယောက်ျားတစ်ယောက် အလောင်း ၃ လောင်းတွေ့ရပြီး အလောင်းတွေဟာ နှစ်ရက်တောင်မပြည့်သေးဘူး … အလွန်ပဲ ပုပ်သိုးပျက်စီးနေတယ် ။(နွေရာသီလည်း မဟုတ်) လူရုပ်မပေါ်၊ ဘယ်သူမှန်း သေချာမသိ။
ရဲတွေက ဘတ်စ်ကားပြန်တွေ့တဲ့ Miyun အထိ ကင်မရာ (traffic monitors) တွေ ကို စစ်ကြည့်တော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အဲဒီ ဘတ်စ်ကားဖြတ်သွားတာ မတွေ့ရ ။
ဒီအကြောင်း ကို ဖြေရှင်းချက်မပေးနိုင်ခဲ့ ။ ဘေဂျင်းမြို့ မှာ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခု လို ကျန်ရစ်တယ်။ နောက်ပိုင်း ဘတ်စ်ကားကိုတားတာ အနီရောင်ဝတ်စုံ အမျိုးသားတွေ အစား….အဖြူရောင်ဝတ်စုံမိန်းကလေး… ဆိုပြီး ဒဏ္ဍာရီပုံပြင် ဖြစ်သွား တယ် ။
ဒီအဖြစ်အပျက် ကို ရဲတွေဘက်ကတော့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် တဲ့ လူသတ်မှုတစ်ခု နဲ့ ဆက်စပ်နေတယ် လို့ ကောက်ချက်ချတယ်။ သတိလစ်မေ့မြောနေတဲ့သူဟာ သေနေပြီး ဘေးကလူနှစ်ယောက်ဟာ အမှန်တက ယ်လူသတ်သမားတွေ လို့ ခန့်မှန်းကြတယ် ။
ယာဉ်မောင်း နဲ့ လက်မှတ်ရောင်း အမျိုးသမီး ထပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပေါ့။ လူသတ်သမားတွေကို ရဲတွေဘက်က အချိန်အတော်ကြာကြာရှာဖွေခဲ့ကြပေမဲ့ ခိုင်မာတဲ့သက်သေမရှိလို့ ဆိုတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လေလုံတဲ့နံရံမ ရှိဘူးတဲ့။ တစ်စုံတစ်ဦး ကတော့ အမှန်တရားကို သိနေမှာပါ။
ဘတ်စ် ၃၇၅ လမ်းကြောင်း လည်း ပြောင်းလိုက်တယ် ။ ဘတ်စ်ကားနံပါတ်ကိုလည်းပြောင်း လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးဘတ်စ်ကားကို ည ၉ နာရီလို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။
ဘေဂျင်း ရဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် နာမည်ကြီး သရဲတစ္ဆေဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ် ။ ဒါရိုက်တာ Wang Huanwu က ၂၀၁၅ မှာ အဲဒီအကြောင်းကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီး ၂၀၁၆ မှာ ရုံတင်ခဲ့တယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတုန်း ရုပ်ရှင်ထဲမှာ မပါတဲ့သူတွေရဲ့ ပုံတွေပါနေတာကို အံ့ဩစွာတွေ့ခဲ့ရတယ်…။
မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံ အနက် ဝတ်ထားတဲ့ ယောက်ျား နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်..။
(Beijing 375 Last Bus Movie – 北京375末班车电影 )
၂၀၀၇ ခုနှစ်လောက်ကစပြီး ဘတ်စ် ၃၇၅ ကောလာဟလတွေ ထပ်ပြီး အင်တာနက်ပေါ်ပျံ့နှံ့လာတယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက် လိုက်တော့ ဘေဂျင်းမြို့သားတွေကို ထပ်ပြီးသတိပေး သလိုဖြစ်သွားတယ်။
တချို့ကိစ္စတွေဟာ ဘယ်တော့မှ ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့အခါ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုလို ဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့..။ ၁၉၉၅၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် ညသန်းခေါင်မှာ ၃၇၅ ဘတ်စ်ကား ရုတ်တရက်ပျောက်သွားတာတော့ အမှန်ပဲ။
ဘေဂျင်းမြို့သားတွေ ဆို ဒီအကြောင်း သိကြတယ် ။
၁၉၉၅ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာ ၁၄ ရကျည..။
ညဥျ့အရမျးနကျပွီး ဆောငျးရာသီက အေးခဲလှတဲ့အပွငျ လကေ အရမျးပွငျးထနျနတေယျ။ ဘတျဈကား တဈစငျး ဟာ ယှမျမငျယှမျ (Yuanmingyuan ) ဘတျဈကားဂိတျက တဖွညျးဖွညျးထှကျခှာ လာတယျ ။ အဲဒီကားက Xiangshan ဘတျဈကားဂိတျအထိ သှားမယျ့ ၃၇၅ ဘတျဈကားဖွဈ တယျ ။
ဘတျဈကားပျေါ မှာ ယာဉျမောငျး နဲ့ လကျမှတျရောငျးသူ အမြိုးသမီးငယျ တဈဦး။
ဒါ ဒီည ရဲ့နောကျဆုံးဘတျဈကားပဲ ။ ပထမဆုံး မှတျတိုငျ (South Gate Bus Station of Yuanmingyuan) မှာရပျလိုကျတော့ ခရီးသညျ ၄ ယောကျတကျလာတယျ။
လူငယျစုံတှဲ တဈတှဲ၊ အဘှားအို တဈဦး ၊ လူငယျ တဈဦး ၊ သူတို့ဘတျဈကားပျေါတကျပွီးတဲ့ အခါ၊ လူငယျစုံတှဲဟာ ကားမောငျးသူ အနောကျဘကျ နှဈတနျးမွောကျက နှဈယောကျထိုငျခုံ ( double-row seat ) မှာတှဲ ထိုငျတယျ။ လူငယျနဲ့ အဘှားအိုက ဘတျဈကားရဲ့ ရှတေံ့ခါးအနီးက ညာဘကျခွမျး (the single-row seat ) မှာရှနေ့ောကျဆငျ့ပွီးထိုငျကွ တယျ။
” ၃၇၅ ” ဘတျဈကား
ညဟာ အေးဆေးတညျငွိမျနပွေီး ဘတျဈကားအငျဂငျြ ရဲ့ဟောကျသံလောကျ ပဲ ကွားနေ ရတယျ။ ဘေးကဖွတျသနျးသှားတဲ့ယာဉျတှနေဲ့ လမျးသှားလမျးလာတှကေိုတော့ မမွငျရ လောကျအောငျပဲ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဘဂေငျြးမွို့ရဲ့ နိုဝငျဘာလ ညဥျ့နကျပိုငျးတှဟော အရမျးအေးပွီး မွူတှကေကြာ မှောငျမိုကျလရှေိ့တယျ။
ဘတျဈကား ဟာ ဝေးလံခေါငျဖြားတဲ့ဆငျခွဖေုံးနရောတှေ ကို ဖွတျသှားတဲ့ ကားမို့..။
( အဲ့ဒီတုနျး က ၃၇၅ ဘတျဈကားသှားရာ လမျးကွောငျး ဟာ အလှနျဝေးလံသောဒသေမြား ကို ဖွတျသနျးမောငျးနှငျ ရတယျ။ )
ဘတျဈကားက နောကျမှတျတိုငျဖွဈ တဲ့ (Beigongmen) ကားမှတျတိုငျကိုဖွတျ သှားတယျ ။ ကားမှတျတိုငျမှာ လူတဈယောကျမှမရှိ။ ဒါကွောငျ့ မရပျတော့ဘဲ ဆကျမောငျး လိုကျတယျ။ ယာဉျမောငျးဟာ ရုတျတရကျကယျြလောငျစှာ အျောဟဈ ညညျးတှားလိုကျတယျ။
“ အိုး ရှမှေ့ာ လူတှပေါလား ။ ဘာတှလေဲ..။ မှောငျလိုကျတာ။ ဒီတဈခါ အမှောငျကတော့ ကြှနျတျော သရဲတဈကောငျ ကို တောငျမွငျနိုငျမှာမ ဟုတျဘူး ။ ဒီနတေ့ော့ ငရဲပဲ ။ ဒီလူတှေ ဘာလုပျနလေဲ မသိ ”
ဘတျဈကားက သူတို့ နဲ့ နီးလာတော့ .. မီတာ ၁၀၀ လောကျ အကှာအဝေးက အရိပျ ၂ ခုဟာ ဘတျဈကား ကို အသညျးအသနျတားနတော ကို ကားပျေါကလူတှေ အကုနျမွငျ လိုကျရတယျ။ လကျမှတျရောငျးသူ ကောငျမလေးက..
“ရပျပေးလိုကျပါ။ အပွငျမှာရာသီဥတု အရမျးအေးနတော.. ပွီးတော့ ကြှနျမတို့ကားက နောကျဆုံးဘတျဈကား မဟုတျလား…?”
( အဲဒီအခြိနျ တုနျး က Yuanmingyuan-Xiangshan Road section မှာ အဲဒီ ၃၇၅ ဘတျဈကားပဲ ရှိတယျ ။ တက်ကစီတှလေညျး အဲဒီလိုဝေးလံခေါငျဖြားတဲ့ လမျးကိုမပွေးနိုငျဘူး..။)
မှတျတိုငျမဟုတျဘဲ ရပျတာ တရားမဝငျပမေဲ့ ကွငျနာတတျ တဲ့ ဘတျဈကားမောငျးသမားက ကားရပျပေး လိုကျတယျ။
ဘတျဈကားပျေါ တကျလာတာ သူတို့ထငျတဲ့ အတိုငျး လူနှဈယောကျ မဟုတျပါ။ လူသုံးယောကျဖွဈနတေယျ ။ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ လူနှဈဦးရဲ့ကွားမှာ နောကျလူတဈယောကျ ရှိနသေေးလို့ပဲ ။
အလယျကလူဟာ သူရဲ့ဦးခေါငျးကို ငိုကျစိုကျ ခထြားတယျ။
ကနျြတဲ့ ၂ ယောကျကတော့ ဟိုးရှေးရှေးတုနျး က အင်ျကြီအရှညျ (Qing Dynasty 1644-1911 ခတျေက) ကို ခွထေောကျဖုံးတဲ့ အထိ ဝတျထားတယျ။ မကျြနှာတှမှော မိတျကပျဖွူဖွူတှေ လိမျးထား သလို..။ လူတှကေ အခွအေနေ ကို ကွောကျလနျ့သှားကွတယျ။
ကားမောငျးသူ ကလညျး ကှကျကွညျ့၊ ကှကျကွညျ့နဲ့ ဘတျဈကား ကို ရှဆေ့ကျမောငျးခဲ့..။ အမြိုးသမီး လကျမှတျရောငျးသူက အားလုံးစိတျသကျသာရာရအောငျ ဒီလိုစကား စတယျ။
“ ဒီနား အနီးတဈဝိုကျ မှာ အဲဒီလိုဝတျစုံတှေ ဝတျပွီး ရုပျရှငျရိုကျကွသလား ပဲနျော..။အဝတျအစားလဲဖို့ အခြိနျမရကွဘူးလား ရှငျ့ ? အလယျက တဈယောကျ အရမျးသောကျလာတယျ ထငျပါ့။ “
သူမပွောတာ ကို လူတိုငျးနားထောငျနတေယျ ။ အားလုံးငွိမျသကျပွီး အသံတဈသံ မှ တုနျ့ပွနျထှကျမလာ။ လကျမှတျရောငျး မိနျးမပြိုလေးက ခေါငျးကိုလှညျ့ကွညျ့ပွီး နောကျဆုံးတနျးမှာ ထိုငျနတေဲ့ လူသုံးယောကျ ကို လေးလေးနကျနကျကွညျ့ လိုကျတယျ။
ဘာ လို့ စကားမပွနျတာလဲ ဆိုတဲ့ အကွညျ့နဲ့ပေါ့..။
ကားကရှဆေ့ကျလကျမောငျး .. ဘတျဈကားက ပွတငျးပေါကျက လတေိုကျသံတှေ တဝူးဝူး နဲ့…။
ဘတျဈကားတဈခုလုံး တိတျဆိတျနဆေဲ…။ ရှမှေ့တျတိုငျကတြော့ လူငယျစုံတှဲဟာ ဘတျဈကားပျေါက ဆငျးသှားတယျ..။ ယာဉျမောငျးနဲ့ စပယျယာအမြိုးသမီးလေးဟာ တိတျဆိတျမှုကို ဖွိုခှငျးတဲ့အနနေဲ့ စကားစမွညျပွောပွီး ရယျမောကွ တယျ။
အဘှားအိုက ရုတျတရကျ မတျတပျထရပျ လိုကျတယျ။
အရှမှေ့ာထိုငျနတေဲ့ လူငယျကို လကျညှိုးငေါကျငေါကျထိုးပွီး
“ သူခိုးဗြို့… သူခိုး!!!”
လို့ အဘှားကွီး က ရူးသှပျစှာအျော ဟဈလိုကျတယျ။
လူငယျက ကွောငျတောငျတောငျ နဲ့ အဘှားကွီးကိုကွညျ့တယျ ။ အဘှားကွီးက အသကျကွီးနပွေီ..စိတျမမှနျဘူးထငျ ပါရဲ့ လို့ တှေးမိတယျ။ အဘှားကွီးက မရပျ.. ဆကျတိုကျအျောနတေယျ။
ကားပျေါမှာ အပွေးတဈပိုငျး ထရပျပွီး စှပျစှဲနေ တဲ့ အမြိုးသမီးအိုကွီး ကို ကွညျ့နရေငျး အဲဒီလူငယျဟာ ဒေါသထှကျ လာတယျ။ အဘှားအိုက ပိုဆိုးတယျ။ လူငယျကိုအျောငေါကျရုံမက လကျဝဲလကျနဲ့ လူငယျရဲ့ ရှပျအင်ျကြီလညျပငျးကျောလာကို ဆုပျကိုငျ လိုကျတယျ။ လူငယျဟာ ပွောမပွနိုငျလောကျအောငျဒေါသထှကျသှားတာပေါ့ ။
“ရှမှေ့တျတိုငျမှာရပျ၊ အဲဒီနားမှာ ရဲစခနျးရှိတယျ”
“ ဒါဆို ရဲစခနျးသှားမယျဗြာ ။ ကြှနျတျောတို့ အမှနျတရားကို ဖျောထုတျရမှာပေါ့”
ဘတျဈကားက မှတျတိုငျ မှာ ရပျတနျ့သှားတယျ။
အဘှားအို က လူငယျလေး ရဲ့ ရှပျအင်ျကြီကို မလှတျဘဲ ဘတျဈကားပျေါက ဆငျးလိုကျတယျ။
သူတို့ကိုထားပွီး မောငျးထှကျသှားတဲ့ ဘတျဈကား ကိုကွညျ့ပွီး အဘှားအိုက အသကျပွငျးပွငျး ရှူလိုကျတယျ ။
“ ရဲစခနျးဘယျမှာလဲ ” လို့ စိတျဆိုးဆိုး နဲ့ အျောလိုကျတယျ။
” ကောငျလေး …မ ငျးရဲ့ အသကျ ကို ငါ ကယျလိုကျတာ”
လူငယျဟာ နားမလညျနိုငျလောကျအောငျဖွဈ သှားတယျ။
“ ကားပျေါ နောကျတကျလာ တဲ့ လူ ၃ ယောကျ ကလူတှေ မဟုတျဘူး။ တစ်ဆတှေဟေဲ့ ”
“အဘှားကွီး .. တကယျ့ ကို စိတျမမှနျ ပါလား” လို့ စိတျဆိုးဆိုး နဲ့လှညျ့ထှကျသှားတော့တယျ။
“ ဟေ့၊ ခဏနဦေး.. မငျးမယုံဘူး မဟုတျလား..သူတို့ဘတျဈကားပျေါတကျလာကတညျးက ငါသံသယ ရှိတယျ။ ဒါကွောငျ့သူ တို့ကို ငါ မသိမသာကွညျ့နတော။ ပွတငျးပေါကျကနေ လတေိုကျတော့ သူတို့ အင်ျကြီအရှညျကွီး လနျသှား တယျ။ သူတို့မှာခွထေောကျတှေ မရှိဘူးဆိုတာ ငါသိလိုကျ ရတယျ။”
လူငယျဟာ မကျြလုံးပွူးပွီး ပါးစပျအဟောငျးသားဖွဈသှားတယျ ။ စကားလုံးတဈလုံး မှ မပွောနိုငျ..။
“ မငျးဘာလုပျနတောလဲ ။ ရဲစခနျးသှားပွီး အကွောငျးကွားရအောငျ ”
သူတို့ ရဲတိုငျပမေဲ့ ဘယျသူက ယုံမှာလဲ…။ လူငယျလညျး သိပျမယုံဘူး ။
ဘတျဈကား ၃၇၅ ယာဉျမောငျး နဲ့ အမြိုးသမီးလကျမှတျရောငျး ပြောကျဆုံးနကွေောငျး သတငျးထဲ ပါလာတာပဲ။ ဘဂေငျြးမွို့ ညနသေတငျးက လူငယျနဲ့ အဘှားအိုကို တိုကျရိုကျတှဆေုံ့မေးမွနျးပွီး ရုပျမွငျသံကွားမှာ လှငျ့လိုကျတယျ။ အဲဒီ ထိတျလနျ့ဖှယျကောငျး တဲ့ သတငျးဟာ လငျြလငျြမွနျမွနျပဲ ပြံ့နှံ့သှားတယျ ။
အဲဒီတုနျးက ဘဂေငျြးမွို ရဲ့ အမှတျ ၃၇၅ ဘတျဈကားပြောကျဆုံးတဲ့ အကွောငျး ဟာ ဘဂေငျြးမွို့ကလူတှေ မသိတဲ့သူ မရှိသလောကျပဲ ။
တတိယမွောကျနေ့ မှာ Xiangshan က ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကြျောေ ဝးတဲ့ ( ကားမောငျးရငျ ၂ နာရီ) Miyun ရလှေောငျကနျနားမှာ ပြောကျဆုံးနတေဲ့ ဘတျဈကားကို ရဲတှကေ ရှာတှေ့ ခဲ့..။
ပထမအခကျြက ဘတျဈကားဟာ တဈနလေုံ့းခရီးသှားပွီးတာကွောငျ့ နောကျထပျ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကြျော ဆကျသှား ဖို့ ဓာတျဆီ အလုံအလောကျမရှိပါ။
ဘတျဈကားထဲက လောငျစာဆီဟာ ဓာတျဆီ မဟုတျဘဲ အမညျးရောငျ ပဈြပဈြအရညျ ( တိရစ်ဆာနျသှေး နဲ့ လူသှေး ရောထားတယျလို့ ထငျရတဲ့ အရညျ) တှနေဲ့ပွညျ့နေ။
ဘတျဈကား မောငျသမား လကျမှတျရောငျးတဲ့ကောငျမလေး ယောကျြားတဈယောကျ အလောငျး ၃ လောငျးတှရေ့ပွီး အလောငျးတှဟော နှဈရကျတောငျမပွညျ့သေးဘူး … အလှနျပဲ ပုပျသိုးပကျြစီးနတေယျ ။(နှရောသီလညျး မဟုတျ) လူရုပျမပျေါ၊ ဘယျသူမှနျး သခြောမသိ။
ရဲတှကေ ဘတျဈကားပွနျတှတေဲ့ Miyun အထိ ကငျမရာ (traffic monitors) တှေ ကို စဈကွညျ့တော့ ထူးထူးဆနျးဆနျး အဲဒီ ဘတျဈကားဖွတျသှားတာ မတှရေ့ ။
ဒီအကွောငျး ကို ဖွရှေငျးခကျြမပေးနိုငျခဲ့ ။ ဘဂေငျြးမွို့မှာ ဒဏ်ဍာရီတဈခု လို ကနျြရဈတယျ။ နောကျပိုငျး ဘတျဈကားကိုတားတာ အနီရောငျဝတျစုံ အမြိုးသားတှေ အစား….အဖွူရောငျဝတျစုံမိနျးကလေး… ဆိုပွီး ဒဏ်ဍာရီပုံပွငျ ဖွဈသှား တယျ ။
ဒီအဖွဈအပကျြ ကို ရဲတှဘေကျကတော့ လြှို့ဝှကျဆနျးကွယျ တဲ့ လူသတျမှုတဈခု နဲ့ ဆကျစပျနတေယျ လို့ ကောကျခကျြခတြယျ။ သတိလဈမမွေ့ောနတေဲ့သူဟာ သနေပွေီး ဘေးကလူနှဈယောကျဟာ အမှနျတက ယျလူသတျသမားတှေ လို့ ခနျ့မှနျးကွတယျ ။
ယာဉျမောငျး နဲ့ လကျမှတျရောငျး အမြိုးသမီး ထပျပွီးသဆေုံးခဲ့ရတာ စိတျမကောငျးစရာပေါ့။ လူသတျသမားတှကေို ရဲတှဘေကျက အခြိနျအတျောကွာကွာရှာဖှခေဲ့ကွပမေဲ့ ခိုငျမာတဲ့သကျသမေရှိလို့ ဆိုတယျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ လလေုံတဲ့နံရံမ ရှိဘူးတဲ့။ တဈစုံတဈဦး ကတော့ အမှနျတရားကို သိနမှောပါ။
ဘတျဈ ၃၇၅ လမျးကွောငျး လညျး ပွောငျးလိုကျတယျ ။ ဘတျဈကားနံပါတျကိုလညျးပွောငျး လိုကျတယျ။ နောကျဆုံးဘတျဈကားကို ည ၉ နာရီလို့ သတျမှတျခဲ့ကွတယျ။
ဘဂေငျြး ရဲ့ တကယျ့ဖွဈရပျမှနျ နာမညျကွီး သရဲတစ်ဆဇောတျလမျး တဈပုဒျဖွဈတယျ ။ ဒါရိုကျတာ Wang Huanwu က ၂၀၁၅ မှာ အဲဒီအကွောငျးကို ရုပျရှငျရိုကျပွီး ၂၀၁၆ မှာ ရုံတငျခဲ့တယျ။ ရုပျရှငျရိုကျနတေုနျး ရုပျရှငျထဲမှာ မပါတဲ့သူတှရေဲ့ ပုံတှပေါနတောကို အံ့ဩစှာတှခေဲ့ရတယျ…။
မင်ျဂလာဆောငျဝတျစုံ အနကျ ဝတျထားတဲ့ ယောကျြား နဲ့ မိနျးမတဈယောကျ..။
၂၀၀၇ ခုနှဈလောကျကစပွီး ဘတျဈ ၃၇၅ ကောလာဟလတှေ ထပျပွီး အငျတာနကျပျေါပြံ့နှံ့လာတယျ။ ရုပျရှငျရိုကျ လိုကျတော့ ဘဂေငျြးမွို့သားတှကေို ထပျပွီးသတိပေး သလိုဖွဈသှားတယျ။
တခြို့ကိစ်စတှဟော ဘယျတော့မှ ဖွရှေငျးလို့မရတဲ့အခါ ဒဏ်ဍာရီတဈခုလို ဖွဈသှားတတျတယျတဲ့..။ ၁၉၉၅၊ နိုဝငျဘာ ၁၄ ရကျ ညသနျးခေါငျမှာ ၃၇၅ ဘတျဈကား ရုတျတရကျပြောကျသှားတာတော့ အမှနျပဲ။
ဘဂေငျြးမွို့သားတှေ ဆို ဒီအကွောငျး သိကွတယျ ။